नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र निकै विवादास्पद रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र लामो समयसम्म सिन्डिकेटको जालोमा जकडिएको थियो । पछिल्लो समय सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि सिन्डिकेटको जालो तहस–नहस भएको छ । यद्यपि, सरकार केही नरम देखिए सिन्डिकेट फेरि ब्युँतिदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले नै यातायातका साधन खरिद गरेर सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नियमन, निर्देशिका बनाउने र गुणस्तरीय यातायात प्रणाली सञ्चालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने डा. आचार्यले बताए :
न्यूनतम दायित्वका रूपमा यातायात सेवा
यातायातलाई अत्यावश्यक र नागरिकको आधारभूत सेवाका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायात भनेको समाजको विपन्न वर्ग, जसको आफ्नो सवारीसाधन हुँदैन, उनीहरूका लागि नभई नहुने सेवा हो । यसकारण पनि संसारभर नै सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाका रूपमा लिने गरिएको छ । त्यसैले यो सरकारको दायित्वमा पर्ने विषय पनि हो ।
न्यूनतम सार्वजनिक यातायात सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो भन्ने विषय पहिलेदेखि नै स्थापित छ र पछिल्ला अवधिमा अझै प्रखर भएर आएको छ । विशेषगरी हालैका वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न, समावेशी विकास गर्न, दिगो विकास गर्न सार्वजनिक यातायातको भूमिका अझ बढी मुखरित भएर आएको छ ।
यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापन
सार्वजनिक यातायतको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी चुस्त बनाउने र यसलाई दीर्घकालीन बनाउने भन्ने विषय सधैँ चर्चामा रहेको छ । यसका विभिन्न मोडल प्रचलनमा रहेका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सरकारको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समयमा भने परम्परागतभन्दा अलिक भिन्न तरिकाको पद्धतिको विकास भइरहेको छ ।
करिब चार दशकअघि युरोप, अमेरिकालगायतका विकासित देशमा सार्वजनिक यातायात नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि राज्यले नै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । लामो होस् वा छोटो दूरी आ–आफ्नै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने गरेको भेटिन्छ । दिल्लीकै दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसन भनेको निजी क्षेत्रकै स्वामित्व भएको कर्पोरेसन (निगम) हो । त्यो हुँदाहुँदै पनि पछिल्लोपटक भइरहेको विकसित रूप भनेको यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।
सार्वजनिक यातायात सेवा सुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्ने विषयमा विवाद छैन । सेवाको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यकै हो । तर, त्यो भन्दैमा सरकारले नै बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ, व्यवसायका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भने होइन । यसमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।
अहिले नेपालकै परिपे्रक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि साझा यातायातलगायत केहीलाई छाड्ने हो भने अन्य सबै सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ । यसो हुँदा सरकारले कति पनि वित्तीय भार बोक्नुपरेको छैन । अनुदान पनि दिनुपरेको छैन । सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो धेरै नै राम्रो पक्ष हो । किनकि अन्य देशमा पनि सार्र्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले करोडौँ, अर्बौं अनुदान दिइरहनुपरेको हुन्छ ।
यस हिसाबले हेर्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको यातायात प्रणालीमा सरकारलाई हाइसन्चो भइरहेको छ । यसकारण वित्तीय बोझका रूपमा हेर्दा यो उत्तम प्रणाली रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, यो मात्र पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको पूर्णता भने होइन ।
गुणस्तरहीन सेवा प्रवाह
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाह गुणस्तरहीन छ । बसहरू थोत्रा छन् । सिटहरू पुराना, मैला र फाटेका छन् । सिन्डिकेटका कारण यात्रुले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन् । सरकारको भूमिका नियामक हो । तर, नेपालमा नियमन गर्ने विषयमा बुझाइ अलि फरक छ । यसमा कमजोरी रहेको छ । सरकारी निकायमा नियमन भनेको ब्लु बुक दर्ता गर्ने, सवारीको कर लिने, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने र रुट परमिट दिने भन्नेमा मात्र सीमित छ ।
नियमनको दायरा यतिमै सीमित हुँदैन । नियमन भनेको देशभर भएका सवारीसाधन, जाने स्थान, आउने र छुट्ने समय, कुन ठाउँमा कति यात्रु छन् र कति सवारीसाधन चाहिन्छ भन्ने तथ्यांकलगायतका विषयलाई समेटेर गरिने वैज्ञानिक र व्यवस्थित पद्धति हो । कुन रुटमा, कस्तो सवारीसाधन चल्ने र कुन आकारको सवारीसाधन चलाउने भन्ने विषय पनि यसमा पर्छ । यसप्रकारले नियमन भएकै छैन । एकदमै कर्मकाण्डी मात्र भएको छ ।
यस्तो भएमा कुनै पनि सवारीसाधन सरकारले सञ्चालन गरोस् वा निजी क्षेत्रले केही फरक पर्दैन । यात्रु वा उपभोक्ताले पाउने सुविधामा एकरूपता र गुणस्तरीय हुनेमा सुनिश्चितता हुन्छ । यो नै सार्वजनिक यातायातको हुनुपर्ने अवाश्यक मोडल पनि हो ।
सरकारकै सवारीसाधन हुनुपर्दैन
विभिन्न समयमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारकै लगानी हुनुपर्ने र सरकारले नै बस खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठ्ने गरेको छ । यो असान्दर्भिक र पुरानो भइसकेको विषय हो । यसका आफ्नै समस्या पनि छन् । बरु अबको बाटो भनेको निजी यातायात सञ्चालनमा रहेका कमजोरी हटाउने र सुधार गरेर व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउने हो । यसमा एकदमै ग्रामीण र विकट क्षेत्रका लागि सरकारले अनुदान पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको वेला स्कुल कलेजका बस त्यत्तिकै बसेका हुन्छन् । तिनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसरी आकस्मिक वेलामा सरकारले सेवा दिने भनेको फरक विषय हो । तर, नियमित रूपमा नै सरकारले बस खरिद गरेर सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय पुरानो र असफल मोडल हो । त्यतातिर जानु हुँदैन ।
कर्पोरेसन बनाएर पनि यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो मोडल भनेको सरकारले यातायातमा लगानी गर्दैन । बस कम्पनीले लगानी गर्छ । खरिद गरिएका बस कर्पोरेसनअन्तर्गत राखिन्छ । त्यसको स्वामित्व निजी कम्पनीले राख्छ । तर, त्यसको सञ्चालन सरकारले गर्छ ।
त्यसमा भएको आयको वितरण पनि प्रभावकारी तरिकाले गर्ने गरिएका उदाहरण धेरै देशमा भेट्न सकिन्छ । यस्तो मोडलमा सरकारलाई कम्पनीले भाडामा (लिज)मा दिएको हुन्छ । बसले महिनादिनसम्म गुडेको आधारमा त्यसको आय बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । सरकारले बस किनेर सञ्चालन गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय असम्भव छ । यसतर्फ जानु घातक हुन्छ । यो सम्भव छैन भन्ने विगतका उदाहरणबाट पनि सिक्नुपर्छ । विभिन्न मोडल अपनाएर मात्र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
मास भेहिकलमा सरकारी स्वामित्व अनिवार्य
सवारी यातायातमा रेल, मेट्रोरेल, ट्रामजस्ता ठूलो मात्रामा सञ्चालन गरिने र एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो भनेचाहिँ सरकारी स्वामित्व आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ठूलै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि व्यवस्थापन पक्षमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन सकिन्छ ।
तर, सरकारको पनि केही न केही स्वामित्व भने रहनुपर्छ । त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउने हिसाबले कति स्वामित्व लिँदा सहज हुन्छ भन्ने विषय भने आवश्यकता र औचित्यमा भर पर्ने विषय हुन् । युरोप अमेरिकाको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने देखिँदैन । त्यस्ता देशका विज्ञले दिएको सल्लाहअनुसार पनि नेपालको यातायात प्रणाली सुधार हुने छैन । यसका लागि नेपालकै आफ्नो आवश्यकता र सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
#डा. सूर्यराज आचार्य #यातायात सञ्चालन
आर्थिक पारदर्शिता हेर्न संसदीय समिति
प्रधानन्यायाधीश भन्छन् : अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाण पनि दिनू
प्रधानमन्त्री ओलीको माधव नेपाललाई कटाक्ष, कवितात्मक कुराको पछि नलागौं
भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई न्यायाधीशको रेकर्ड संवैधानिक परिषदमा
राष्ट्रसंघ बैठकमा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै
नमूना बन्यो अछामको साँफेबगर नगरपालिका
राष्ट्रपति भण्डारी फर्किंदै, प्रधानमन्त्री ओली जाँदै
नेकपा एकता विवाद : नेपाल समूहको समानान्तर सूची
मानव सेवा आश्रमको भवन बनाइदिने मेयर शाक्यको घोषणा